Ururka weriyayaasha aan xudduudda lahayn oo dhaleeceeyey dilka weriye Faarax Xasan Sahal oo maalmo ka hor Muqdisho lagu dilay. – Radio Daljir
Paris, Aug 08 – Ururka suxufiyiinta aan xudduudda lahayn ee fadhigiisu yahay magaalda Paris ee dalka Faransiiska ee Reporters Without Borders ayaa si kulul u canbaareeyey dilkii magaalada Muqdisho loogu geystay weriye Faarax Xasan Sahal, una shaqayn jiray Radio Simba.
Weriye Faarax Xasan Sahal, ayaa la sheegay in hal mar madaxa laga toogtay halka laba jeerna laabtada xabad lagaga dhuftay, xilli isaga iyo laba saxiibadiisa kamid ah ay doonayeen in ay qalab ka saaraan xafiiska Radio Simba iyagoo gaynlahaa meelo ammaan ah.
Dagaalladaii u dhexeeyey ciidamada dawlada Somalia oo ay kaabayaan xoogaga AMISOM iyo dhinac kale oo ay ka soo jeedeen Al-shabaab ayaa ku qasbay idaacaddii Simba in ay hakiso hawlaheeda war-baahineed.
kooxda fadhigoodu yahay Paris ee illaaliya xorriyada saxafiyiinta ee lagu magcaabo Reporters Without Borders ayaa sheegay in ay aad uga naxeen warka dilka weriyahaasi, waxana ay ku baaqeen in baaritaan dhamaystiran la sameeyo.
” Iyadoo dareenka caalamku xilligan xaadirka ah uu xoogga saarayo abaaraha iyo macaluusha ka jirta somalia, laakiin dhacdadaan waxa ay ina xusuusinaysaa in mashaqada ka taagan Somalia aanay ahayn baahi gargaar bani?aadantinimo oo kaliya ee waa fawdada iyo nidaam la?aanta dalkaasi ka jirtay labaatankii sano ee ugu dameeyey?ayaa lagu yiri hadalka weriyaasha aan xudduudda lahayn ee Reporters Without Borders.
” Saxafiyiinta ku sugan gudaha Somalia waxa ay ku shaqeeyaan xaalada xun, waxaa ay bartanka ka galaan xabado lays weydaarsanayo , iyadoo ay si cad u bar-tilmaameedsadaan rag maleeshiyaad ah oo saxaafada kasoo hor-jeeda, waa in la dabagalaa oo la ciqaabaa kuwii ka masuulka ahaa falkaan foosha xun” ayaa Weriyaasha ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Reporters Without Borders.